Laacibka khadka dhexe uga ciyaara Real Madrid ee Toni Kroos ayaa si buuxda uga soo kabtay dhaawac haleelay kulankii Real Betis oo garoonka laga saaray qaybta hore oo aan dhamaanin.
Zinedine Zidane ayaa war-farxad leh ka helay xiddigiisa oo labadii ciyaarood ee u dambeeyey inkasta oo ay kooxdiisu guuleysatay haddana la dareemayay maqnaanshihiisa.
Toni Kroos oo booskiisa Real Madrid uu lama taabtaan yahay ayuu Zidane kusii buuxiyey Valverde iyo Martin Odegaard, halka Casemiro iyo Luka Modric ay doorkooda qaateen inkasta oo ruug-caddaaga reer Croatia la nasiyey kulamada qaarkood ciyaarihii horyaalka ee kooxdiisu dheeshay xili ciyaareedkan.
Modric oo kaydka fadhiya ayuu Zidane u yeedhay daqiiqadihii ugu dambeeyey qaybta hore ee kulankii ay dirqiga 3-2 kaga badiyeen Real Betis oo ay marti u ahaayeen, markaas oo uu muruqua ka dareemay xanuun.
Laakiin tababaraha xulka qaranka Germany ee Joachim Low ayaa ku daray liiska xulkiisa ee kulamada UEFA Nations League ee toddobaadkan, waxaanu si buuxda u dhamaystay 90kii daqiiqadoodba kulankii ay magaalada Kiev kusoo garaaceen Ukraine.
Sida uu qoray wargeyska Diario AS, Toni Kroos ayaa taam ah oo diyaar u ah inuu kusoo laabto Real Madrid iyadoo uu ciyaari doono kulanka usbuuca dambe ee kooxda yar ee Cadiz, taas oo ay dhaawac kaga maqnaan doonaan Marco Asensio oo dib u dhaawacmay, Mariano Diaz, Eder Militao, Eden Hazard iyo goolhaye Thibaut Courtois.
Real Madrid waxa toddobaadka soo socda sugaysa ciyaar adag oo ay kusoo dhoweyn doonaan Shakhtar Donetsk oo kulanka ugu horreeya ee Champions League ay foodda isku dari doonaan, waxaana saddex maalmood kaddib ay ballansan yihiin Barcelona oo ay kulankooda hore ee El Clasico foodda isku dari doonaan, ka hor inta aanay wada ciyaarin Borussia Monchengladbach, Huesca, Inter Milan iyo Valencia.
Muxuu yahay walaaca Qaramada midoobay ka qabto Bangiyada